DegDeg: Ethiopia oo Samaysay Maxjarka ugu Weyn Geeska Afrika iyo Saamaynta ay ku leedahay Xoolaha Soomalida ee loo Dhoofiyo Sucuudiga - Wargane News
Home Somali News DegDeg: Ethiopia oo Samaysay Maxjarka ugu Weyn Geeska Afrika iyo Saamaynta ay...
Dawladda Ethiopia oo Maxjarka ugu weyn ka Furtay Dalkeeda isala Markaana Toos looga Dhoofin doono Xoolaha dalkaaasi Dakadda Djibouti iyadoo aan lasii marin Maxjaradda Djibouti ku Yaal.
Maalmihii sucuudigu joojiyay guud ahaanba in xoolaha uu ka soo dhoofsado Dalalka Somaliya iyo somaliland ayaa waxa safar aan hore looga baran ku yimi somaliland wafti sare oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee jabouti, isla beryahaas jabouti waxa ay saldhig ciidan siisay dalka sucuudiga!.
waxa aan sii tibaaxay suurtagalnimada in jabuuti damac kaga jiro qaadashada doorka dhoofinta xoolaha soomaalida maadaama la xayiray, sidoo kale waxa jirtay waxa jirtay in dawladda itoobiya siiba madaxwaynaha kililka shanaadi uu doonayay in xoolaha itoobiya si toos ah looga dhoofiya jabouti.
itoobiya waxa ay naawilaysay in ugu yaraan xoolaha ku nool xayndaabkeeda oo somalidu inta u badan dhaqdo ay ka heli doonto malaayiin dollar oo dheef ah , taana ay u samayso laba hab:-
in ay aasaasto meelo ay xoolaha ku sii cashuurto ka hor inta aanay xuduudeeda ka tallaabin ugu horrayn, haba ka dhoofaan dekedaha somaliya iyo somaliland e. halkaana ay waxoogaa dhaqaale ah ka hesho.
in ugu dambayn xoolaha ka imanaya xayndaabka itoobiya ay iyadu si toos ah ugu dhoofiso sacuudiga , halkaana ay macaash wayn ka hesho.
maanta itoobiya waxa laga dhisay maxjarkii ugu horreeyay ee xoolaha si toos ah ugu dhoofin lahaa sucuudiga, xilli ay xayiraadi saaran tahay wali xoolihii soomaalida.
itoobiya waxa uu u saamixi doonaa in xoolo badan ay ka soo dhoofiso ilaa gobalka gambeelaha ee lo’da sida wayn loogu dhaqdo.
jabuutina dillaalka dekedaheeda ayaa ay horeba u doorbidi jirtay.
Xooluhu somalida waxa uu ahaa il dhaqaale oo wayn waxase muuqata in hadda lagula tartamayo, tiiyoo aanay jirin qorsheyaal lagu waajaho.
in badan ayaynu ka caga jiidnay in aynu xoolaha u raadino suuqyo badan kuna iibinno qiimaha dahabka oo kale , waa hubaal in aynu ku iibin doonno qiimaha nacnaca inta ka soo hadhay abaaraha hadii aynaan qorshe cad la iman .